BY ANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 REALITY LACAG AH, GUUL POSTS
All-in-ka mid ka mid ah capacitive taabashada taxanaha Kiosk
Dabaqa IR-dabaqa taagan ee taabashada totemka
Heerka daba-galka xayeysiinta ee taabashada xayeysiiska ah ee dabaqa ah
Isweydaarsi taxane ah oo dhijitaal ah oo la qaadi karo oo taxane ah
Ciyaartoyda xayeysiinta banaanka
Kormeeraha xayeysiiska ee gidaarka lagu dhejiyo
Darbiga-ku-dhegan dhammaan-dhammaan-taxane taabashada tamarta leh
Taxanaha taabashada IR ee gidaarka
Ganacsiyada adduunka oo dhan ayaa hadda isku daraya tikniyoolajiyadda si kor loogu qaado alaabada iyo adeegyada lana ilaaliyo waqtiyada. Isbeddellada cusub ee tikniyoolajiyadda cusub ee sannadka 2020 waxay ku wajahan yihiin inay ku daraan ikhtiyaarro ballaadhan oo xaqiiq ah sida Augmented Reality (AR) iyo Virtual Reality (VR) oo laga dhigo warshado badan, gaar ahaan Retail. Lahaanshaha macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo barto dalabka ganacsiga noocan oo kale ah iyo shirkadaha dhabta ah ee dhabta ah ee sameeya iyaga ayaa xaqiiqdii waxtar leh.
Maxaad ugu adeegsaneysaa VR ganacsiga?
Waxaa jira dhowr faa'iidooyin oo ganacsi marka la isticmaalayo farsamada VR. Sannadka 2018, suuqa AR / VR waxaa lagu qiimeeyay qiyaastii $ 12 bilyan, waxaana la saadaalinayaa inuu kor u dhaafo in ka badan $ 192 bilyan marka la gaaro 2022.
1. Khibrad Macaamiisha La Korsaday
VR iyo AR waxay oggol yihiin khibrad dheeri ah oo is dhexgalka ah iyo diiradda saarashada wax iibsiga. Dareenka macaamiisha ayaa ku mashquulsan oo awood u leh inay is isqariyaan oo xoogga saara khibradda dalwaddii aan lahayn wax ku jeedinta ah ee dibedda ah. Tani waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay khibrad u yeeshaan badeecada jawiga dalxiiska ah.
2. Istaraatiijiyadaha Suuqgeynta Dhexgalka ah iyo Isdhaxgalka ah
Tiknolojiyadda VR waxay u oggolaaneysaa ganacsatada inay lahaadaan firfircoonaan badan oo dabacsanaan leh iyagoo adeegsanaya fikradda 'isku day ka hor intaadan iibsan'. VR-ga, suuqgeynta badeecada waxay kuxirantahay abuurista khibrad gacanta koowaad ah ee sheyga. VR wuxuu awood u leeyahay u qaadista dadka meel kasta, dhab ama mala awaal. Tikniyoolajiyaddan ayaa suuqgeynaysa ka sheekaynta sheekada badeecada isla markaana u oggolaanaysa macaamiisha iyo maalgashadayaasha inay khibrad u yeeshaan sheyga laftiisa.
3. Falanqaynta Ganacsi Sare iyo Isticmaalaha Macaamiisha
VR waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay qiimeeyaan suuq-geynta, waxqabadka, iyo tayada sheyga. Ganacsiyada waxay awoodaan inay aruuriyaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida alaabada ay macaamiisha u helaan. Suuqa ayaa falanqeeya macluumaad xoog badan oo loo isticmaali karo in lagu hagaajiyo tayada waxsoosaarka lana kordhiyo daacadnimada macaamiisha.
Xaqiiqda Virtual waxay bixisaa fursado badan oo lagu dalbado dhammaan warshadaha kala duwan. Suuqyadu waxay awoodaan inay dhisaan filashooyinka iyo xiisaha iyagoo siinaya macaamiisha mustaqbalka iyo maalgashadayaasha fursad ay ku waajahaan alaabada ama adeegyada la bixiyo, sida safarada iyo dib u cusboonaysiinta booska. Adeegsiga VR oo ah qayb ka mid ah alaabada iyo adeegyada ay bixiso shirkadda waxay sare u qaadeysaa kala duwanaanta wax soo saarka shirkadda iyo khibradda ay macaamiisha u leeyihiin alaabahooda.
Marriot Hotels waxay isticmaashaa VR si loogu oggolaado martidooda inay la kulmaan laamahooda kala duwan ee adduunka oo dhan. In kasta oo Hay'adda Duurjoogta ah ee South iyo West Wales ay bixiso VR set adeegsi iyo fiidiyowyo 3D si ay uga quustaan ​​booqdayaasha khibrada u leh booqashadooda iyo ku raaxaysiga duurjoogta. VR ee dalxiiska waxay kaloo cadeysay inay faa iido u tahay shirkadaha ku lugta leh. Wadashaqeynta u dhaxeysa Thomas Cooke iyo Samsung Gear VR waxay laheyd boqolkiiba 40% ROI seddexdii bilood ee ugu horeysay markii la bilaabay.
Shirkadaha hagaajinta guryaha sida IKEA, John Lewis, iyo Lowe's Home horumarinta ayaa sidoo kale ka faa'iidaystay VR. Teknolojiyaddu waxay u suurtagelisaa macaamiishooda inay ku sawiraan qorshahooda hagaajinta guriga ee 3D. Kaliya tan kaliya maahan inay xoojiso aragtidooda guryahooda, laakiin waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay horumar ku sameeyaan qorshayaashooda oo ay ku ciyaaraan booskooda ugu fiican iyagoo adeegsanaya alaabada ay shirkadda soo bandhigtay.
Dukaamada tafaariiqda ee TOMS ee adeegsada VR waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay ku safraan kabaha oo ay raacaan sida ka soo gala iibsigooda ay ugu gudbaan tabarucaadka Bartamaha Ameerika. Shirkadaha gawaarida sida Volvo waxay siiyaan macaamiishooda fursad ay ku tijaabiyaan wadista mid ka mid ah moodooyinkooda cusub iyadoo loo marayo barnaamijkooda VR. McDonald's waxay isticmaaleen sanduuqoda farxadda leh waxayna u beddeleen VR set Goggles Happy oo macaamiisha ay u isticmaali karaan inay ciyaaraan oo ay la falgalaan.
Shirkadaha guryaha la kireysto, sida Giraffe360 iyo Matterport, waxay siiyaan macaamiishooda dalxiis hanti gaar ah. Dhismaha guryaha ayaa sidoo kale kor loogu qaaday VR, waxayna kordhisay wakiilka iyo ka qeybgalka macaamiisha iyo xiisaha. Qorshayaasha suuq-geynta iyo qaab-dhismeedka ayaa u noqday macaamiil iyo wakiilo istaraatiijiyadeed iyo teknolojiyad VR ah.
Ballaarinta Xaqiiqda ayaa ah mustaqbalka
Iyada oo la sii wado fidinta horumarka teknolojiyadda VR iyo adeegsiga, waxaa la qiyaasayaa in sedex meelood meel wadarta macaamiisha adduunka ay isticmaali doonaan VR marka la gaaro 2020. Oo dad badan ay helaan oo adeegsadaan tikniyoolajiyadan oo kale, ganacsiyada xaqiiqdii waxay raaci doonaan iyagoo siinaya alaabada la jaan qaada VR. iyo adeegyada. Xaraashka tikniyoolajiyadda noocan oo kale ah si ay ugu fududaato ganacsiyada waxay kobcisaa alaabada, adeegyada, istiraatiijiyadaha suuq-geynta, iyo daacadnimada macaamiisha.
Waqtiga boostada: May-13-2020
raadkeena, hogaaminta, hal abuurka, alaabada
WAA LAGU SAMEEYAA MUQAALKA DIGITAL S ...
MARKA DHAQAN EE MUQDISHO DIGITAL S ...
SIDEE BAAD UGU XULAN KARTA KARTA DHAQANKA?
Cinwaanka: Dhismaha C, Beerta Warshadaha Caalamiga ee Gaoke, Degmada Guangming, Shenzhen, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. Alaabada kulul, Khariidadda Goobta